'We dare not squander the moment:' Zimbabwe's new leader | Daily Mail Online
Published: 02:10 EDT, 24 November 2017 | Updated: 13:27 EDT, 24 November 2017
HARARE, Zimbabwe (AP) - Zimbabweans must set aside "poisoned" politics and work together to rebuild the nation and re-engage the world, new President Emmerson Mnangagwa said Friday, delivering an inclusive message to an exultant crowd that packed a stadium for his inauguration.
Spectators cheer from the stands at the inauguration ceremony of President Emmerson Mnangagwa in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa was sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
Emmerson Mnangagwa, center, is sworn in as President at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
A member of the military band dances as they wait for Emmerson Mnangagwa's presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
Main opposition leader Morgan Tsvangirai, center, arrives at the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa was sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
A man holds up a Zimbabwean flag at the inauguration of President Emmerson Mnangagwa's in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. New Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has vowed he will work to improve the economy to reduce unemployment and return the country to prosperity. (AP Photo)
Emmerson Mnangagwa inspects the military parade after being sworn in as President at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
Emmerson Mnangagwa, center, and his wife Auxillia, right, arrive at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
Emmerson Mnangagwa smiles during his presidential inauguration ceremony in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov.24, 2017. Mnangagwa has been sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37 year rule. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Emmerson Mnangagwa, center, and his wife Auxillia, center-right, arrive at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe, Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
Emmerson Mnangagwa, second left, with Army General Constantino Chiwenga, second right, inspects the military parade after being sworn in as President at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Emmerson Mnangagwa, centre, takes his seat at his presidential inauguration ceremony in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37 year rule. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Emmerson Mnangagwa, center right, with Army General Constantino Chiwenga, center left, inspects the military parade after being sworn in as President at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Emmerson Mnangagwa, center right, inspects the military parade after being sworn in as President at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
Emmerson Mnangagwa, center-right, and his wife Auxillia arrive at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
An honor guard marches on to the field for Emmerson Mnangagwa's presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Christopher Torchia)
The military parade at the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
Women hold portraits of Emmerson Mnangagwa at his presidential inauguration ceremony in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov.24, 2017. Mnangagwa is been sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37 year rule. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A Zimbabwe Air Force officer reads a program showing the face of Mnangagwa at the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
Army General Constantino Chiwenga, center, arrives with his wife Mary at the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is been sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37 year rule. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
The crowd cheers and dances at the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is been sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37 year rule. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean judges arrive for Emmerson Mnangagwa's presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Christopher Torchia)
A man hangs a portrait Emmerson Mnangagwa at his presidential inauguration ceremony in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov.24, 2017. Mnangagwa is been sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37 year rule. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Spectators attend the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
People gather for the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov. 24, 2017. Zimbabweans are converging on a stadium ahead of the presidential inauguration of Mnangagwa, who will become the country's second leader since independence from white minority rule in 1980.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean military arrive for the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
The crowd cheers and dances at the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov. 24, 2017. Zimbabweans are converging on a stadium ahead of the presidential inauguration of Mnangagwa, who will become the country's second leader since independence from white minority rule in 1980.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean soldiers sit in the stands at the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in the capital Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule. (AP Photo/Ben Curtis)
A soldier runs to take her position at the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa will be sworn in Friday as Zimbabwe's new leader, but many are questioning whether he'll be able to bring the change the country craves. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Soldiers make their final drills at the presidential inauguration ceremony of Emmerson Mnangagwa in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov. 24, 2017. Mnangagwa will be sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37 year rule.(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Emmerson Mnangagwa, centre, stands during his inauguration ceremony in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov.24, 2017. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37 year rule. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)